lundi, 15 février 2021 07:14
Covid-19 : Fivoaran'ny antontan'isa
238 ny tranga vaovao tamin'ireo 2458 nanaovana fitiliana teto Madagasikara ny 6 hatramin'ny 12 febroary 2021 : 139 Analamanga7 Vakinankaratra33 Atsinanana5 Analanjirofo1 Matsiatra Ambony2 Amoron'Imania2 Ihorombe4 Boeny5 Atsimo andrefana10 Anosy26 Menabe3 Diana1 "non identifié"
Araka ny tatitra nataon'ny Tale rejionaly momba ny ala eto Androy, izay niantso ny Zandary aty an-toerana, dia tamin'ny alakamisy 11 Febroary 2021 lasa teo dia nahazo vaovao avy amin'olona tsara sitrapo ny chef cantonnement n'izy ireo ao Beloha momba trafika sokatra, ka rehefa naheno izany ity farany dia nidina tany Benonoky kaominina ambanivohitra Tranovaho, Distrika Beloha niaraka tamin'ny lehiben'ny Distrika sy ny Ben'ny tanàna tany an-toerana. Rehefa nahita azy ireo moa ny olon-dratsy dia vaky nilefa ka sokatra 810 no azon'izy ireo tamin'izany. Efa eo ampelatanan'ny Zandary moa ny raharaha ary manohy ny fikarohana ireo olona nanangona ireo sokatra ireo. Efa naverina any amin'ny Parc ihany koa ireo sokatra. Hisy ny fihaonan'ireo tompon'andraikitra amin'ny fiandohan'ny herinandro io andaminana ny fomba fiasa ahafahana miaro ireo harem-pirenena ireo. (Jereo Sary Tohiny)
Nomarihina teny Ambohijatovo Avaratra androany ny fahatsiarovana ny faha-46 taona nahafatesan’ny Jeneraly Ratsimandrava Richard teo am-perinasa. Tonga nanome voninahitra izany fotoana izany ny Praiminisitra Ntsay Christian. Ny Tafika Malagasy manontolo no niara-nisalahy nanatontosa izao fahatsiarovana izao, ary toy ny isan-taona dia niompana tamin’ny fanomezam-boninahitra an’ireo rehetra nodimandry teo am-panatanterahana ny fanompoana ny firenena nandritra ny herintaona farany ny lanonana. Nametraka fehezam-bonikazo teo amin’ny tsangambato teo amin’ny toerana naha-lavo ny Jeneraly ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny ao amin’ny Tafika, ary nanomboka an’izany ny Lehiben’ny governemanta.
Taloha kelin'ny fidiran'ny mpianatra EPP, dia nilaza ny Filoham-pirenena fa tsy mandoa vola ny Ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra, tsy mandoa FRAM ihany koa ny telo volana voalohany fa iantohan'ny fanjakana izany, dia hita eo ny manaraka hoy hatrany izy. Maro ireo Ray aman-dreny nanala ny zanany tany amin'ny sekoly tsy miankina, ary dia nampianatra any amin'ny EPP tsy andoavam-bola. Taty aoriana anefa dia nitsahatra tsy nety nampianatra ny mpampianatra FRAM maro, satria tsy nisy karama noraisina, satria tsy hita izay vola nomenan'ny fanjakana, ireo Ray aman-dreny ihany koa tsy nety andoa sarany sy ny latsakemboka FRAM satria efa nilaza ny Filoham-pirenena fa tsy adoavam-bola ny fampianarana zaza. Maro ireo Talen-tsekoly no sahirana satria misy manendrikendrika nanodikodim-bola, ny karama tsy voaloa, ny entina hividianana fitaovam-pampianarana toa ny tsaoka (craie) tsy misy.Ao kosa ireo sekoly namory ny Ray aman-dreny ka dia niverina nandoa FRAM indray ny sekoly.Ireo mpianatra haverina any amin'ny sekoly tsy miankina tsy tafaverina ny betsaka satria efa nikatona ny fandraisana mpianatra.
Nahitana henan'omby very Ramona Mpivarokena iray teto Vatofotsy Mahafaly Antsirabe ny marainan'ny Alahady 07 febroary. Vao maraina dia tsikaritra ny fahitana vatan-dahy nivezivezy nanodinina ny plakin'ny Tiko vatofotsy. Rehefa nohadihadiana dia fantatra fa mpanaradia omby very izy ireo, ary hitan'izy ireo fa tsy lavitra teo ny fiafaran'ny dian'omby. Rehefa tena voamarin'izy ireo dia hita fa niditra vavahadikely iray makao amina mpivarokena ny dian'omby ny maraina. Nifampiantso ireo vatan-dahy ka niditra an-keriny tao anatin'ny fefy, ka voaporofo fa hita tao ny omby efa voarasa sy efa nisy ampahany teny ambony akalana mihitsy aza.
Nisy sambo lehibe roa somary mitovitovy mifanaraka, dia heverin'ny olona ho sambo iray mihantsona eny afovoan-drano, ka nampisahotaka ny mpanara-baovao. Nisy tokoa sambo 2 lehibe tany amin'ny faritra SAVA, izay nijanona tao Vohémar ny 31 janoary 2021 sy ny 03 febroary 2021, ary samy nihazo an'i Toamasina avokoa izy ireo. Ny sambo voalohany dia i RONALDO II IMO 7510688 niaraka tamin'ny tatsambo 15, ary nanainga tamin'ny 06h05 maraina ny 31 janoary 2021 hiazo an'i Toamasina. Nampidina Kaontenera izy io, ary tsy nisy entana noentiny.
Ho tohin’ny fanambarana navoakany tamin’ny 14 Janoary 2021, ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny dia mampahafantatra fa mitohy ny fifampiraharahana amin’ny fampodiana eto Madagasikara ireo volamena nogiazana tany Afrika Atsimo sy ireo olona nitondra an-tsokosoko ireo volamena ireo. Tsiahivina fa ny raharaham-pitsarana tamin’ny 12 Janoary 2021 dia nahemotra ny 1 Febroary 2021. Tamin’io andro io dia nanapa-kevitra ny Fitsarana ao Kempton Park fa ahemotra amin'ny 19 Febroary 2021 indray izany fotoam-pitsarana izany. Mandra- mpahatongan’izay dia mbola tazomina vonjimaika ireo telo lahy voapanga. Ny anton’ny fanemorana dia ny fisian’ny fitoriana manoloana ny Fitsarana Avo any Afrika Atsimo, izay napetrakin’ny orinasa iray any Dubaï, mitonona ho tompon’ny volamena sy mpampiasa ireo telo lahy tratra, izay mpiara-mitory ihany koa. Miantefa amin’ny Ministeran’ny Polisy afrikana tatsimo ny fitoriana, noho ny fiheveran’ireo mpiampanga fa tsy ara-dalàna ny fitazomana azy telo lahy sy ny entany. Ho tanterahina ny 9 Febroary 2021 izao ny fitsarana mifanandrify amin’izany fitoriana izany.Ary satria mety hisy fiantraikany mivantana amin’ny fangatahan’ny Fanjakana malagasy izany, dia nandray ny fepetra rehetra ny Fanjakana malagasy hiaro ny fitakiany. Anisan’izany ny fakana mpisolo-vava any an-toerana hisolo tena ny fanjakana sy hanao izay ahazoany rariny amin’ny dingana rehetra ara-pitsarana mahakasika ity raharaha ity.
Ny 31 janoary 2021 tamin'ny 9ora maraina dia nahazo antso avy tamin'ny sefo Fokotany Andranoteraky, Kaominina Befandriana-sud ny Tobim-paritrin'ny Zandarimaria eto Befandriana sud fa nisy nangalatra ny osin'ny lehilahy iray, avy any Maharihy, Kaominina Basibasy Distrikan'i Morombe ny sasakalin'ny 30 janoary 2021. Osy miisa 26 no vvery ary voalaza fa dahalo 5 lahy mitondra basy PA vita gasy sy famaky aman-defona no nangalatra. Noho ny fampandrenesana ara-potoana, dia voasakan'ny fokonolona tany Bejaky Fokotany Andranoteraky, Kaominina Befandriana-sud, Distrikan'i Morombe ireo dahalo niaraka tamin'ny osy nangalariny, nanohitra tamin'ny fitifirana ireo dahalo. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny roa tonta.
lundi, 01 février 2021 12:54
Lalam-pirenena faha-2 : tapaka ny fifamoivoizana omaly tolak’andro
Tapaka nandritra ny ora vitsy ny fifamoivoizana tamin’iny lalam-pirenena faha-2 iny omaly alahady 31 janoary tolak’andro noho ny lozam-pifamoivoizana nitranga tao Betrafo. Fiarabe mpitatitra solika na camion-citerne an’ny orinasa Logistique Pétrolière niakatra avy any Toamasina no niala lalana tsy satry tampoka ka nahadona ny lohan’ny fiarabe nitondra conteneur nidina avy any Antananarivo, izay nifanena taminy tao anatin’ny fiolahana kely iray ny rambony. Samy nitondra enta-mavesatra ny roa tonta ka samy nahitana fahasimbana ara-materialy avokoa.Tsy nisy ny naratra sy ny namoy ny ainy saingy voabahana tanteraka ny lalana ka vetivety monja dia am-polony maro ny fiara niakatra sy nidina tavela tao, indrindra ireo fiara vaventy. Ny fiara madinika sy ny kodiaran-droa kosa mba afaka nisisitsisika tamin’ny lala-miolaka vonjimaika mandalo an-tokontanin’olona teo akaiky teo ihany.
samedi, 30 janvier 2021 08:15
Tetezana Manambaro : Mandeha ny asa fanamboarana
Mizotra tsara ny asa fanajariana ny fivilian-dalana vonjimaika iampitàna ny renirano eo akaikin’ilay tetezana tapaka ny 2 janoary teo, any amin’ny kaominin’i Manambaro, amin’iny lalam-pirenena faha-13 mampitohy an’i Tolagnaro sy Ambovombe Androy iny. Efa herinandro mahery izay no nanombohan’ny asa, izay ifandrimbonan’ireo mpitatitra sy ireo mpiray ombon'antoka toy ny orinasa mpitrandraka fasimainty QMM, ny orinasa goavana tohanan’ny Banky Iraisam-pirenena Bovima, ny fitaleavam-paritry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary ny faritra Anôsy. Izao no tanteraka dia vokatry ny fikaonandoha teo amin’ireo mpitatitra sy ireo tompon'andraikitra voakasika ao amin’ny faritra Anôsy mba ho fitohizan’ny fifamoivoizana hatrany, araka ny fampitam-baovao. Voatery nanodidina tany amin’ny 8,5 kilometatra mahery ny fiara mpandalo amin’iny RN13 iny taorian’ny fahatapahan’ny tetezana any Manambaro.Miakatra, noho izany, ny saram-pandanian’ny mpitatitra koa dia nisondrotra ihany koa ny saran-dalana Tolagnaro-Ambovombe, izay lasa 15 000 Ariary raha 10 000 Ariary teo aloha.